Mandalas inuu midabeeyo si bilaash ah oo diyaar u ah inuu soo dejiyo | Abuurista khadka tooska ah
Mandalas inuu midabeeyo si bilaash ah oo diyaar u ah inuu soo dejiyo
Mandalas waxay ku jiraan moodal. Uma adeegaan oo keliya inay arkaan sawir na sifeynaya, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaalaa inay yihiin qalab caawiya ka fiirsashada, nasashada, iyo inaan waqti la qaadanno nafteena Sidaa darteed, la yaab ma leh inaad raadsato mandalas midab leh si aad uga faa'iideysato iyaga.
Laakiin, Waa maxay mandalas? Xagee ka heli kartaa mandalas midab leh? Sidee uga dhigtaa inay shaqeeyaan? Haddii aad la yaabban tahay, halkan waxaan ku siineynaa furayaasha wax walba.
1 Waa maxay mandalas
2 Maxaad ugu isticmaashaa mandalas midabaynta
3 Mandalas inuu midabeeyo: halka laga helo
3.1 Kaliya Midabka
3.2 Guri midabaynta
3.3 Ciyaal salaan
3.4 Isniinta mandala
3.5 100% Mandalas Bilaash ah
3.6 Mandala 4 bilaash ah
4 Furayaasha la shaqeynta mandalas ee midabaynta
Waa maxay mandalas
Waxaan ku bilaabi doonnaa inaan kaa caawinno inaad ogaato waxa mandalas ay yihiin. Tani, oo loo yaqaan Dultson Kyilkhor Tibetan, waa qaab ay adeegsadaan Buddhist, Jains, iyo Hindus markay bixiyaan. Iyaga, mandalas waxay matalayaan jirka iyo maskaxda Buddha, iyaga oo siiya awood weyn xagga dhaqankooda. Waxay u egtahay in caalamku loogu deeqay ilaahyada sawirkaas.
Wax dad aad u yar ogyihiin ayaa ah mandalas waxay ka kooban yihiin qaybo kala duwan. Tusaale ahaan, xarunta ayaa had iyo jeer matali doonta Mount Meru. Kani waa buur barakaysan, oo in ka badan 1081479 kilomitir ah. Kahor intaadan ka raadin khariidad si aad u booqato waxaan kuu sheegi doonaa in goobta saxda ah aan weli la helin. Mount Meru waxaa la sheegaa inuu leeyahay afar dhinac, midabkiisuna midab yahay: lapis lazuli, ruby, gold, iyo crystal. Sidaa awgeed, xarunta mandala waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan.
Maxaad ugu isticmaashaa mandalas midabaynta
Miyaad u maleyneysaa in mandala midabaynta kaliya loogu talagalay carruurta? Waa hagaag runta ayaa ah maya. Kuwani waxaa loogu talagalay dadka waaweyn oo, rumaysta ama ha rumaysan, buugaagta mandala ee ay iibiyaan kumanaan.
Sida laga soo xigtay khubarada, cilmi-nafsiga, dhakhaatiirta, iwm waxaa jira saameyn aad u wanaagsan oo ku saabsan midabaynta mandalas. Waana inay saameyn ku yeeshaan culeyska fekerka iyo dhaqdhaqaaqa maskaxda. Si kale haddii loo dhigo, way ku nasinaysaa waxayna ka caawineysaa maskaxdaada inay degto, isku buuqsanaanta ay faafto, oo aad diirada u saarto wax aad sameyso, adigoo indhaha ku haya wax kasta oo kale. Is deji, ciribtirka caajiska, naftaada xoree, sii daa hal-abuurkaaga, iyo xitaa inaad ka fikirto waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay sawirradan leeyihiin.
Kaliya waxaad ubaahantahay inaad haysato mandalas iyo midabbo si aad uhesho. Waxaan sidoo kale kaa caawin karnaa taas.
Mandalas inuu midabeeyo: halka laga helo
Jawaabta su'aashaas waxay ku jiri kartaa dukaamada buugaagta, maadaama ay jiraan buugaag badan oo la sii daayay oo ay ka mid yihiin mandalas. Laakiin sidoo kale waxaad ku heli kartaa iyaga oo bilaash ah khadka tooska ah. Waxaa jira boggag internet oo badan oo ku soo bandhig mandala midabaynta, badankoodna waxay ku jiraan PDF, oo diyaar kuu ah inaad ku daabacato bilaash.
Halkan waxaan kaaga tagnay dhowr goobood oo aad ka heli doonto mandalas midab leh.
Waa degel aad ku heli doonto kumanaan mandala ah iyo sawirro guud ahaan. Laakiin ha ka welwelin, haddii aad raadineyso mawduuc gaar ah, way kuu fududeynayaan maxaa yeelay sidaas ayaa lagu kala soocay.
Markaad hesho midka aad rabto, waa inaad soo degsataa oo keliya. Waxay ku siin doonaan PDF si aad u daabacan karto dhib la'aan.
Websaydhkani wuxuu bixiyaa tiro badan oo sawirro ah, laakiin sidoo kale waxaa jira mandala loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Dabcan, ma lahan sida ugu badan ee bogagga kale ee shabakadaha, laakiin kuwa ay leedahay ayaa soo jiidan kara dareenkaaga, wax badan.
Ha ku kadsoomin magaca ama naqshada websaydhka. Dhexdeeda waxaad ka heli doontaa qayb u gaar ah mandalas waxaana lagu abaabulaa mawduuc iyo heerka dhibaatada.
Doorashadan Waxaan kugula talineynaa haddii aad horeyba khibrad ugu laheyd midabaynta mandalas. Waxayna noqon kartaa wax adag in la dhammaystiro markii aad aragto wax badan oo rinji ah, iyo xitaa kakan.
Laakiin haddii aad rabto inaad isku daydo, waxaad ka heli doontaa naqshado aad u la yaab leh in, haddii aad sameyso, aad ku qanci doonto natiijada.
100% Mandalas Bilaash ah
Tani uma baahna nooc kasta oo soo bandhigid ah maxaa yeelay waxaad si sax ah u ogtahay waxaad ka heli doonto. Dhammaan nashqadaha mandala waa la heli karaa si loo daabaco qaar badan oo ka mid ahna waxaa dhiirrigeliya dhaqanka caanka ah. Dabcan, haddii aad dhab ahaantii rabto nuxurka mandalas ee midabaynta, waxaan kugula talineynaa inaad diirada saarto kuwa soo jireenka ah, oo aad ka tagto dadka kale shineemooyinka, telefishanka, iwm.
Mandala 4 bilaash ah
Xaaladdan oo kale waxaad leedahay degel ballaadhan oo aad ka heli doonto naqshado badan oo mandalas ah si ay u midabeeyaan oo u daabacaan. Oo dhammaantood waa bilaash! Waad heshay oo loo kala saaray qaybo iyo mawduucyo oo xitaa waad abuuri kartaa naqshadahaaga.
Furayaasha la shaqeynta mandalas ee midabaynta
Kahor intaadan bilaabin booqashada websaydhada aan kugula talinay midabaynta mandalas, ma dooneyno inaan ka tagno mowduuca adiga oo aan marka hore ku siinin hage yar oo aad tixgeliso. Mana aha arrin la soo dejin karo mandalas, sawirida midabada iyo bilawga midabka. Si aad uga faa'iideysato isticmaalkeeda, waa inaad raacdaa qaar xeerar fudud:
Haddii tani ay tahay markii ugu horreysay ee aad sameyn doontid, waxaa ugu wanaagsan in la doorto mandalas qaabab waaweyn leh.
Haddii aad rabto inaad iska yareyso xiisadda, buuqa, iwm. ka dibna dooro mandalas leh qaabab yaryar.
Si aad u kordhiso niyaddaada kuwa ugu fiican ayaa ah kuwa qaababka wareegsan.
Marka ay timaado midabaynta, waxaad ku samayn kartaa midabbada biyaha, qalinka, calaamadaha, waxes ...
Waxaa jira laba farsamood oo rinjiyeynta ah: laga bilaabo gudaha (si loo muujiyo sida aan dareemeyno xilligaas); ama bannaanka ilaa gudaha (si loo helo xarunteena).
Waa inaad maskaxdaada ka dhigtaa mid diiradda saareysa sawirka, haddii kale ma shaqeyn doonto. Sidaa darteed, markasta dooro meel deggan oo deggan oo aad keligaa waqti ku qaadan karto keligaa adigoon lagu qasin.
Dooro midabada aad rabto. Halkaas ayaa khiyaanadu ku jirtaa. Markaad dhameysato, waa inaad ka fikirtaa sababta aad u dooratay sawirkaas, midabadaas, isku darkaas ... Uma baahnid inuu noqdo mid hagaagsan, kaliya dhammee.
Adoo maskaxda ku haya waxaas oo dhan, waa waqtigii aad ku dhex mari lahayd websaydhyadaas, ama kuwa kale ee aad taqaan, oo aad ku soo dejiso mid ka mid ah mandalas midab. Mid ka bilow oo isku day, haddii aanad hore u samayn, si aad u aragto dareenka ku siinaya. Hadaad jeceshahay, waad sii wadan kartaa markasta. Ujeeddadu waa inaad naftaada ku xirnaato oo, wixii ka sarreeya, waxaad leedahay waqti nabadeed iyo nasasho kaa caawinaysa inaad fiicnaan dareento.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Mandalas inuu midabeeyo si bilaash ah oo diyaar u ah inuu soo dejiyo
Sida loo sameeyo montage sawir fudud Photoshop